Vivo V19 Neo nanambara: Mid-range vaovao miaraka amin'ny Android 10 | Androidsis
Vivo V19 Neo nanambara: Mid-range vaovao miaraka amin'ny Android 10
La Orinasa Sinoa Live nampiditra telefaona finday vaovao ianao any amin'ny firenenao antsoina hoe Vivo V19 Neo, telefaona iray heverina ho antonony noho ny fikirakirana tafiditra. Mamirapiratra noho ny toetrany ara-teknika izy, toy izany ny mety ho finday avo lenta takiana amin'ny fialany amin'ny andro ho avy.
Mamaky ny pejin'ny mpanamboatra izay mampiseho amin'ny an-tsipiriany ny zava-drehetra, ary mampiseho izany aza Izy io dia manana mpamaky sidina eo ambanin'ny tontonana, iray amin'ireo voafidy tsara indrindra amin'ny telefaona. Toy ny hoe tsy ampy izany, tonga miaraka amin'ny sosona manokana ao ambanin'ny rafitra Android farany io rehefa nesorina tao anaty boaty.
1 Vivo V19 Neo, ny endriny rehetra
Vivo V19 Neo, ny endriny rehetra
Miaina V19 Neo aho dia variant fanampiny an'ny Vivo V19 Pro, saingy miaraka amin'ny fandrisihana ny hahatratra ny haavon'ny ny tsipika Vivo X50. Fitaovana iray izay hanana iraka lehibe hidirana ao Filipina matanjaka, ho any amin'ny firenena izay ho tonga aloha amin'ny herinandro ambony miaraka amin'ny vidiny antonony.
Izy io dia manana efijery 6,44-inch an'ny Super AMOLED Ultra O karazana miaraka amin'ny vahaolana Full HD + ary mpamaky ny rantsan-tànana tafiditra ao ambanin'ny tontonana. Tapakevitra ny hametahana ny processeur Snapdragon 675, RAM 8 GB, fitehirizana 128 GB ary misy batterie 4.500 mAh miaraka amin'ny fahafaha-miasa 18W
Manasongadina fanamboarana fakantsary miendrika LManomboka amin'ny sensor 48 MP, ny faharoa dia solomaso 8 MP ultra-wide, makro 2 MP, ary sensor lalina 2 MP. Ny fakan-tsary selfie dia 32 MP misy maody roa hahazoana ny tsara indrindra amin'izany. Io dia terminal 4G noho ny CPU-ny, ankoatry ny fananana fifandraisana Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ankoatry ny fifandraisana hafa. Ny rindrambaiko dia Android 10 miaraka amin'ny sosona Funtouch OS 10.
Miaina V19 Neo aho
SCREEN 6.44-inch Super AMOLED Ultra O miaraka amin'ny Full HD + vahaolana
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 128 GB
CAMERAS REAR 48 MP Main Sensor - 8 MP Ultra Wide Sensor - 2 MP Macro Sensor - 2 MP halalin'ny sensor
CAMERA HATRANY Sensor 32 MP miaraka amin'ny maody Super Night sy Super Night Selfie
BATERA 4.500 mAh misy fiampangana haingana 18W
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 10 miaraka amin'ny Funtouch OS 10
ASA hafa Mpamaky rantsantanana eo amin'ny efijery
El Miaina V19 Neo aho Izy io dia efa voalahatra mialoha amin'ny alàlan'ny pejin'ny mpanamboatra amin'ny vidiny PHP17,999 (eo amin'ny 320 euro eo ho eo ny fanovana). Tonga amin'ny loko roa izy: Admiral Blue sy Crystal White.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Vivo V19 Neo nanambara: Mid-range vaovao miaraka amin'ny Android 10
Ny lalao an-dàlam-pamoahana dia mamoaka maherifo mahatalanjona Exo miaraka amina RPG, hatsikana ary endrika endrika mahafinaritra
Ahoana ny fikirakirana ny fampandrenesana MIUI isaky ny rindranasa